June 11, 2020 - Khitalin Media
ကလေးမွေးပြီး (၃) ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
June 11, 2020 Khitalin Media 0
ကလေးမွေးပြီး (၃) ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်) ”ကလေးမွေးပြီး ရင် ၄၅ ရက် တိတိ ယောကျာ်း နဲ့ မနေနဲ့ ”ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျ စကားပေါ့ … “ယောကျာ်းဖြစ်ရ တာ ကံကောင်းပါတယ်” […]
အမေနဲ့ညီမလေးကို ပလက်စတစ်ကောက်ပြီး ရှာဖွေကျွေးမွေးနေသော ဆယ်နှစ်သား လူလိမ္မာလေးနှင့် တွေ့ဆုံမှု (ရုပ်သံ)
လူတစ်ယောက်မိသားစုအပေါ်သိတက်နားလည်ဖို့ဆိုတာအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်။အခုကလေးလေးဟာ ၃ တန်းအထိသာ ကျောင်းနေခွင့်ရခဲ့တာပါ။ ဒီကလေးကို ကို Htin Lin Aung (ပုလဲမီးသတ်)မှ ညအမှောင်ကြီးထဲ ခေါင်းမီးသေးသေးနဲ့ ရေသန့်ဘူးအခွန်တွေ လိုက်ကောက်နေတာ တွေ့ပြီး ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ ကို Htin Lin Aung မှ ကလေးအား ကျောင်းထားပေးမည်ဆိုတာတောင် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ငြင်းခဲ့တဲ့ […]
ရုတ်တရက် သွေးတိုးလာရင် ၁ မိနစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး သက်သာစေမည့် နည်းလမ်း
သွေးတိုးရောဂါ ရှိတဲ့သူတွေဟာ သွေးတိုးတဲ့ဝေဒနာကို အချိန်နေရာမရွေး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရုတ်တရက် သွေးတိုးလာပြီး သောက်နေကျဆေးလည်း အနားမှာမရှိ၊ ကုသမှုခံယူဖို့လည်း မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ သွေးတိုးဝေဒနာကို တစ်မိနစ်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် အရေးပေါ် နည်းလမ်းလေးကို ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ သွေးတိုးနေလား မတိုးဘူးလားဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ သိနိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့လူတွေဆိုရင် […]
ကျွန်တော် ရွာရောက်တော့ ရုံးပတီသီး စိုက်သည့် တောင်သူ တစ်ဦးမှ ပြောပြသဖြင့် ထပ်ဆင့်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရုံးပတီသီး ကို အစိမ်းတို့စားရတာ ကြိုက်သည်ဆိုက ရုံးပတီသီး ကို ဆားရည်ဖြင့် နာရီဝက်ခန့် စိမ်ပြီးမှ စားပါရန် အကြံပေးပါသည်။ ရုံးပတီသီး ကြိုက်သော ပိုးမွှား များတွင် လှေးပိုးသည် နှိမ်နင်းရန် […]
နေ့နံအ လိုက် ကံဇာ တာ နိမ့်ပါးမှေးမှိန်တ တ်သော အသက်အရွ ယ်များ မွေး နံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးတတ်ချိန်များ (ကလေးသူငယ်များမှာတော့ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး) အားနည်းတတ်ချိန်များကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုသိရှိနိုင်ပြီး ဆိုင်ရာ ယတြာပိုင်းလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ သေသဝိဇ္ဇာပညာရပ်အရ […]
ဤကာလအတွင်း ထီပေါက်သကဲ့သို့ ငွေများဝင်တတ်သည်။ မိသားစု အကြီးအကဲ လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ တို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖခင် ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်သည်။ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင် ကြီးစွာကြုံမည်။ အတိုက်အခံမှန်သမျှ အနိုင်ရမည်။ လက်ဝတ်ရတနာများ ကျောက်ပြုတ်ထွက်ခြင်း ပျောက်ခြင်း၊ ဖြစ်တတ်သည်။ ဘုရာဆင်းတုတော် စွယ်တော် ရဟန္တာပုံတော်များ […]
ခတျေလူငယျတှေ မသိတော့တဲ့ ၃ ပြောကျလို့ ၅ကှယျ ၆ရှာနဲ့လှဲ ပြိုတို့မောငျ ရှရေောငျလှဲတယျ ၄ရှာက ဆှဲ ရဲ့ အဓိပ်ပါယျ
ခေတ်လူငယ်တွေ မသိတော့တဲ့ ၃ ပျောက်လို့ ၅ကွယ် ၆ရွာနဲ့လွဲ ပျိုတို့မောင် ရွှေရောင်လွဲတယ် ၄ရွာက ဆွဲ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ၃ပျောက် ဆိုတာကရတနာသုံးပါးကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေတာ။(ရတနာသုံးပါး-ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာမြတ်သုံးပါး) ၅ကွယ် ဆိုတာက ငါးပါးသီလ မပြည့်စုံတာ။အဲဒီလို ၃ပျောက်ပြီးတော့ ၅ကွာသွားရင်၆ရွာနဲ့လွဲဆိုတာက နတ်ပြည် […]
အလုပ်သမား (၃၀) ကျော်လုံးကို တစ်ယောက် ဆယ်သိန်းစီ ပေးဝေတဲ့ အလုပ်ရှင် (ရုပ်သံ)
အလုပ်သမား ၃၀ ကျော်လုံးကို တစ်ယောက် ဆယ်သိန်းစီ ပေးဝေတဲ့ အလုပ်ရှင် ဒီနေ့ တပည့်တွေကိုမုန့်ဖိုး တယောက် ၁၀ သိန်းပေးလိုက်ပါပီ. အားလုံးအတွက် စုစုပေါင်း သိန်း ၃၀၀ ဝန်းကျင်ပါ… ကိုယ်လည်းအဆင်ပြေလို့ ချမ်းသာလို့တော့မဟုက်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက်တော့ လိုအပ်တာတွေအတွက်ထောက်ပန့်မူ့တခု ဖြစ်ကြပါစေ.. ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုပေးရတဲ့ဘဝကို […]
အိမ်သူအိမ်သားများဖို့ ဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းပြီး စီးပွားတက်မည့် အိမ်ဆောက်နည်း
နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် (တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့သိမ်းထားခဲ့တာပါ။အခုခေတ်မှာ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီ။) ဆရာကြီးဒဂုန် ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း တွေ့မိလို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ထဲက အိမ်ဆောက်ရင် လိုအပ်ချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်ဆရာ ပါ။ သူရေးခဲ့တဲ့ စာစုကို ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဝေဒင်္ဂတို့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ စား-၀တ်-နေ-ရေး ကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီ စား-၀တ်-နေ-ရေး ဆိုတဲ့ စကားလေး […]